देशकै सबैभन्दा ठूलो यातायात व्यवसायीको संस्था आसन्न नारायणी यातायात व्यवसायी संंघको यहि पुष २७ गते नयाँ नेतृत्वका लागि चुनाव हुदैछ । चुनावबाट नयाँ नेतृत्वका लागि यतिबेला प्यानल बनाएर प्रचार प्रसारमा लाग्ने काम भइरहेको छ । यसअघि संघको नेतृत्व जिम्मेवारी बहन गरिसकेका गोकर्ण पराजुलीको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा दीपक शिवाकोटीले उम्मेदवारी दिएका छन् । मध्यमाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी संघको अध्यक्ष तथा महासंघको केन्द्रिय सहसचिव रहेर जिम्मेवारी बहन गरेका शिवाकोटीसंग मध्यस्थताले उनको उम्मेदवारी, यातायात क्षेत्रका सवाल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ ।
मध्यस्थता : नारायणी यातायातमा आगामी कार्यकालका लागि तपाईंले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । तपाईंको उम्मेदवारी के का लागि ?
दीपक : यातायात व्यवसायीहरुमा पनि विशेषत : ट्रक व्यवसायी यतिबेला एकदमै मारमा छन् । सरकारले देशलाई कति गाडी आवश्यक छ भन्ने कुरा भन्न सकिरहेको छैन । देशलाई कति आवश्यक पर्ने हो, व्यवसायीलाई कति चाहिने हो भन्ने कुरा सरकारले अहिलेसम्म प्रष्ट पारेको छैन । जसकारण अहिले व्यवसायीहरु आइसीयुमा राखेको बिरामी जस्तो भएका छन् । मेरो उम्मेदवारी यसै कारण हो कि व्यवसायीहरुलाई पनि आफ्नो व्यवसाय निर्धक्कले गर्न पाउँने वातावरण बनाउँन तथा राज्यलाई पनि व्यावसायीको पक्षमा ध्यान दिनका लागि जिम्मेवार बनाउँनका लागि पनि हो । वास्तवमा अहिले यातायात व्यवसायीले विभिन्न प्रकारका समस्या झेलिरहेका छन् । गाडी दुर्घटनामा परेको अवस्थामा दुर्घटना स्थलमा क्रेनको व्यवस्था, तीन वर्षसम्म नयाँ गाडी नथप्नका लागि दबाब दिन, ढुवानीमा अहिले भइरहेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार अन्त्य, संस्थाभित्र आर्थिक चलखेल रोकी पारदर्शी बनाउँन, गाडीको हिडाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान तथा व्यवसायीको अन्य हितको काम गर्नका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने सबै खालको भूमिका निर्वाह गर्न मे संघमा पुग्नुपर्छ । यसैले मैले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
मध्यस्थता : यातायात व्यवसायीको पक्षमा विगतमा तपाईंले के कस्ता काम गर्नुभएको छ ?
दीपक : अहिले पनि म मध्यमाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी संघको अध्यक्ष हुँ । मैले अहिले पनि व्यवसायीको मन जित्दै कार्यकुशलता पूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छु । पेट्रोलियम व्यवसाय जसले गरिरहनुभएको छ उहाँहरु सबै खुशी हुनुहुन्छ । अब म सबै यातायात व्यवसायीको पक्षमा लाग्नुछ यसैले म नारायणी यातायात व्यवसायी संघमा उपाध्यक्षका रुपमा उम्मेदवारी दिएको छु । मैले विशेषगरी ट्याङ्कर क्षेत्रमा जिम्मेवारी ढङ्गबाट काम गरे । एक कार्यकाल उपाध्यक्ष दुई कार्यकाल अध्यक्षको रुपम आफ्नो जिम्मेवारी बहन यतिखेर मैले गरिरहेको छु । महासंघ केन्द्रमा सहसचिवको भूमिकामा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको पनि छु । अहिलेको मेरो भूमिका पनि मैले व्यवसायीको मन जितेरै प्राप्त गरेको हुँ । अहिले नेपालका यातायात व्यवसायी धरासायी अवस्थामा छन् । कतिको घर तथा श्रीमतीको गहना समेत गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ । दुर्घटनामा जहिले पनि यातायात व्यवसायी नै दोषी हुनुपर्ने अवस्था छ । सडकमा पैदलयात्री, साइकल,देखि अन्य जनावरलाई समेत बचाउँदै यातायात गुडिरहेका छन् । केही कारणबस कुनै दुर्घटना भएमा सबैभन्दा ठूलो निशानामा यातायात व्यवसायी नै पर्नु परको अवस्था छ ।
मध्यस्थता : उम्मेदवारी घोषणापछि प्रचार प्रसारमा चाँही तपाईं कसरी लागिरहनुभएको छ ?
दीपक : काठमाडौंमा पुगेर व्यवसायहरुसंग भेटघाट गरेर फर्किएको छु । हाम्रो उम्मेदवारीले त्यहाँ धेरै व्यवसायी उत्साहित भएको मैले पाएँ । चितवनमा यातायात व्यवसायीका माझमा पुग्दा उहाँहरुले तपाईंहरु जस्तो युवा यातायात क्षेत्रको विकास, व्यवसायी हकहितका लागि चाहिन्छ भन्ने प्रतिकृया पाएँ । केही दिन अघि वीरगञ्ज पुगेर हामीले व्यवसायीसंग भेटघाट गर्यौ । त्यहाँ पनि गोकर्ण पराजुली प्यानल नै आफूहरुको पक्षमा काम गर्ने नेतृत्व हो भनेर व्यवसायीहरु ढुक्क बन्नु भएको हामीले पायौं । मलाई पराजुली प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएकोमा पनि उहाँहरु निकै उत्साहित बनेको मैले पाए । यो बीस वर्षको अन्तरालमा गोकर्ण पराजुलीले दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसक्नुभएको, कोषाध्यक्ष तथा सदस्यको भूमिकामा रहेर महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गरिसक्नु भएको कारण उहाँजस्तो इमान्दार, निस्कलङ्क व्यक्तिको पछाडी तपाई उभिनुभयो तपाईंलाई हाम्रो साथ रहन्छ भनेर व्यवसायी साथीहरुले भन्नुभएको छ । उहाँहरुको हाम्रो प्यानललाई जुन प्रकारको साथ हौसला पाएँ त्यसले मलाई निकै उत्साहित बनाएको छ ।
मध्यस्थता : यहाँले प्यानल बनाएर जाँदा व्यवसायीले राम्रो प्रतिकृया दिएको भन्नुभयो । व्यवसायीको हितमा लाग्नका लागि प्यानल बनेरै जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? यहाँहरु आपसमा मिलेर जान सक्नुहुन्न ?
दीपक : तपाईंले सही कुरा गर्नुभयो । व्यवसायीले रुचाएको व्यक्ति नै संघको नेतृत्वमा आउँनुपर्छ । हामीले यो बिचमा सहमतीका लागि प्रयास पनि गर्यौ । सहमतीको प्रयास गर्दा पनि आकांक्षी बढी देखिए, आकांक्षी बढेपछि प्यानल बन्छ नै । दुई जना अध्यक्ष उठ्ने बित्तिक्कै नेतृत्वका पछाडी अन्य आकांक्षी लागि हाल्छन् । तर मलाई के लाग्छ भने व्यवसायीले जो चाँही साँच्चे व्यवसायिक हितमा लागेका छन्, जसले व्यवसायीको लागि भोलीका दिनमा काम गर्न सक्छन् उनीहरुलाई नै चुनावमा जिताउँने छन् ।
मध्यस्थता : हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौं, आफ्ना मतदातालाई तपाईको उम्मेदवारीका विषयमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
दीपक : म पहिलो कुरा व्यवसायीलाई के भन्छु भने मलाई भोट हाल्नुभन्दा पहिले मैले विगतका गरेको कार्य हेर्न सक्नुहुनेछ । हिजोका दिनमा व्यवसायीको हकहितका पक्षमा मैले गरेका कामबारे उहाँहरु जानकार हुनहुन्छ । आगामी दिनमा पनि म समग्र व्यवसायीको हितमै काम गर्नेछु । मलाई उपाध्यक्षमा जिताउँन भोट दिनुहोला । तपाईंको मत खेर जाने छैन, यातायात व्यवसायीको भलो हुने गरी काम गर्न निरन्तर लागिपर्नेछु ।